Ny DH-ROC vaovao haingam-pandeha amin'ny famoahana haingam-pandeha ho an'ny mpanjifa - DH Flexo Printing
Tamin'ny volana Martsa 2019, DH flexo dia nametraka milina fanontam-pirinty DH-ROC vaovao ho an'ny orinasa mpanjifa.
DH-ROC flexo print machine
Ny vokatra fanontam-pirintin'ny mpanjifa dia ny fonosana, izay efa nampiasaina tamin'ny milina fanoratana tamin'ny ranomainty solvent. Taorian'ny fitsapana maro, hitan'ny mpanjifa fa ny fampiasana mpanonta flexo miaraka amin'ny fanontana ranomainty miorina amin'ny rano dia afaka mampihena be ny vidin'ny fampiasana ranomainty (fihenan'ny 30% eo ho eo). Noho izany, nanapa-kevitra ny mpanjifa fa hanolo tsikelikely tsindry ny press gravure an'ny orinasa amin'ny press flexo.
Amin'izao fotoana izao, ity mpanjifana ity dia nanome baiko ny servisy flexo 3 DH-ROC feno serivisy feno. Ny DH-ROC dia manamboatra fomba fiasa feno fiara sy fitaovana fantsom-batana mba ahazoana antoka ny fahamarinan'ny milina amin'ny haingam-pandeha sy ny haavon'ny fanovàna print.
Araka ny fihetsiky ny mpikirakira ny mpanjifa, ny DH-ROC dia afaka mahatratra 9 tapitrisa metatra isam-bolana faran'izay betsaka amin'ny famokarana tena izy, ary 350-400 metatra isa-minitra ny isa famokarana antonony, miaraka amina fizarana taratasy mandeha ho azy, fisoratana anarana mandeha ho azy, ary hafa miasa. Manatsara ny famokarana mpanjifa ary mampihena ny vidin'ny famokarana.
Ankoatra ny taratasy fametahana, ny DH-ROC dia azo ampiasaina amin'ny fanontam-pirintin'ny zava-pisotro misy alikaola, fanontam-pirinty sy saha hafa. Amin'izao fotoana izao, maro ireo DH-ROC modely ho an'ny sehatra samihafa dia mametraka ny famokarana ary mikendry ny fandefasana aloha.
Ny endriky ny vokatra DH-ROC:
Serivisy servo feno amin'ny 8 servo motors per group color.
Kitapo miloko mandeha amin'ny haingam-pandeha tsy misy fijanonana
Fehezin'ny haingam-pandeha (ranom-boankazo hatramin'ny 450 m / min)
Fiatrehana faneriterena maivana
Internet access remote access
Raha mila fanazavana misimisy kokoa dia azonao atao ny mifandray amin'ny: dhprint@donghang.cn
← Masinina fanontam-pirinty flexo vaovao DH napetraka ao Torkia
Ny milina fanontam-pirinty DH-Jiaolong dia naseho tao amin'ny Shanghai 2019 SINO Corrugated Exhibition. →